AKHRISO: Sida Soomaaliya Loo XAASIDAY Islaamiyiintii Loona Soo CELIYAY Hogaamiye Kooxeedyadii Oo loogu GACAN GELIYAY gobollada dalka..? | Afrikada
AKHRISO: Sida Soomaaliya Loo XAASIDAY Islaamiyiintii Loona Soo CELIYAY Hogaamiye Kooxeedyadii Oo loogu GACAN GELIYAY gobollada dalka..?
Jul 19, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Muqdisho: Waqtigu waa uu isbedelay ciyaartuna heer caalami ayey gaartay, shirarkii Afrika lagu qaban jirey waxaa hadda loo aadayaa wadammada dibadda, waxaanu maqalnaa magaalooyinka reer Yurub oo laga bilaabay in lagu shiro Brussels, Stocholm, London iwm. Markii hore waxaanu ka yaabaneyn Tripoli, Mbagathi, Qaahira, Carta iyo kuwo kale oo gudaha gobolka ah balse si loola dhuunto khabaaraadka haatan waa la fogeeystay howshii waxaana hadda ay mareysaa in Yurub looga soo tashado waxa ka dhici doona Soomaaliya.
Waxaanu dhaliili jirney hogaamiyeyaal kooxeedyadii dalka, balse waxaa soo baxay BAHALLO DAD CUN AH oo la magac baxay hogaamiyeyaal gobolleed. Uma dhaqmaan sida madaxweyne gobolleedyo ee waxaaba ay ku awood yihiin madaxweynaha dalka ee dastuurku dhigayo in isaga talada looga dambeeyo.
AKHRISTOW Rumeyso ama ha rumeysan, waxaa si toos ah loo gacan geliyaya wadanka Soomaaliya. Waxaana aynu nahay ummadda keliya ee adduunka ee ilaa haatan gumeysi aan ka bixin.
Tan iyo markii 1991-dii ay burburtay dowladii milateriga ee dalka maamuleysay waxay Soomaaliya soo martay marxlado adag oo wejiyo kala duwan leh kuwaasoo ka dhashay dowlad la’aanta dalku lugaha la galay.
Waqtigii ugu adkaa ee la soo maray waxaa ugu darnaa xiliyadii uu dalku u kala qoqobnaa hogaamiye kooxeedyada laga soo bilaabo 1992-kii illaa 2005, waxay ku bilowdeen labo hogaamjiye kooxeed balse sanadba sanadka ka dambeeya way sii tarmayeen, waxayna dalka u kala googoyeen qeybo yar yar oo ay qabiil iyo qori ku maamulaan.
Bal u fiirso tan iyo markii wadanka Kenya lagu soo dhisay dowlada Somalia lana qaatay hanaanka federaalka, ayaa waxaa mar kasta sii yaraanayey saameynta hogaamiye kooxeedyadaas oo badankood ku biiray dowlada halka qaar kalena ay noqdeen howlgab waqtigu ka daba yimid, waxaana arintaas ay abuurtay yididiilo dowladnimo iyo in laga baxay xiligii madoobaa.
Balse Nidaamka federaalka oo loogu talo galay iney isku maamulaan dalalka kala qowmiyadaha iyo diimaha ah sida Itoobiya oo kale ayaa horey aqoonyahano badan ay uga digeen in lagu maamulo dalka, hase ahaatee siyaasiyiin danahooda eeganaya oo dulaaliin u ah dowlado cadow ah ayaa qasbay in federaal lagu maamulo dalka.
Baddaba Tan iyo markii la sameeyey madaxda maamul goboleedyada hadda ka jira dalka, iyadoo la fulinayo hanaanka federaalka ayaa waxaa soo baxay dhibaatooyinkii laga digayey, waxaana bilowday shaki cusub, waxay ilooween iney la mid yihiin gudoomiyeyaal gobol, waxayna bilaabeen iney ka hor yimaadaan, lana xafiiltamaan dowlada dhexe oo badankood soo dhistay, iyagoo la soo baxay dhaqankii hogaamiye kooxeedyadii hore ee dagaalka.
Haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa 13 sifo oo ay ka siman yihiin hogaamiye kooxeedyadii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada hadda jira.
1-Ku dhaqanka qabyaalada
2-Kala googooynta dalka iyo kala qodobida shacabka.
3-Ku xirnaanshaha dowlado shisheeye iyo fulinta danahooda.
4-Isla weyni dhiiqo lala dhex fadhiyo.
5-Dowlad jaceyl ku kooban afka baarkiisa.
6-Alle ka cabsi la’aan iyo towfiiq xumo.
7-Adeegsiga maleeshiyo beeleedyo loo geliyey shaati dowladeed.
8-Isxulufeysi aan wax dhiseynin oo ku dhisan qabyaalad ama siyaasado kale oo wax lagu duminayo.
9-Isbaaro siyaasadeed iyo carqaladeyn ku wajahan wax kasta oo aysan dantooda gaarka ah ku jirin.
11- Ka qeybgalka shirar dalka iyo dadka lagu kala qeybinaayo.
12- Waxay mudnaanta 1aad, 2aad iyo 3aad siiyaan danahooda gaarka ah, sida Dhaqaale, Xil, iyo dana shisheeye.
13-Abuurida Xasarado siyaasadeed iyo iska horjeenka bulshada.
14-Wadaniyad la’aan iyo damiir xumo
Haddaba Maxaa diidaya in la yiraahdo dalka waxaa heysta hogaamiye kooxeedyo shaatiga bedeshay, sow ma dhihi karno fari kama qodna dhisida nidaamka dowladeed ee Soomaaliya.
Waa immisa hogaamiyeyaasha INA HEYSTA oo reer Yurub iyo Mareykan u gacan geliyeen dalka Soomaaliya kadib markii la burburiyey nidaamkii diinta ee aynu inagu maskaxdeenna ka soo hindisnay ?
Hogaamiye Kooxeedka Somaliland
1-Hogaamiye Kooxdeedka Somaliland ma-mudne Muuse Biixi Cabdi, Ninkani gobolkiisu weli wax badan kama oga halista ka dhaceysa Soomaaliyada Koonfureed, badankood reer Waqooyigu iyaga ayaa isku mashquulsan walow maxaakiimtii ay ku sii wajahnaayeen balse ma aynan gaarin. Si kastaba waa hogaamiye kooxeed mabda’yadooda u gaarka ah wata iskuna maamula feker ay iyagu sameysteen.
Hogaamiye Kooxeedka Puntland
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
2-Hogaamiye Kooxdeedka Puntland: ma-mudne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Waxaa Puntland la aasaasay sanadkii 1998-kii markii badankood ay qoorta laabeen hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya ugu waaweynaa. Puntland weligeed Soomaalinimo guud waxa ay ka aaminsaneyd in aan dib loo soo celin karin, waxaana la cunsuriyadeeyay dhammaan dadkii deganaa gobollada Puntland oodatay ee Bariga iyo Bartanka Soomaaliya iyada oo Puntland isku kooxeeysatay qaab boqortooyo asali ah oo ay hab HAL BEEL AH awoodda gacanta ugu jirto, reer Puntland dhexdooda ayaa is cunsuriyadeeya waxaana jufo waliba ay jufada kale ugu cago jugleysay in ay iyadu tahay saldannadii weynayd ee Majeerteeniya. Taas ka sokow hogaamiyeyaashooda goboleed waa musiibo mar walba isku taaga madaxweyne kasta oo federaal ah, goonina u goosta in ka badan wixii gobollada kale qaadanayeen ama magac Soomaali lagu qeybsado. Hogaamiyaha ugu roon waa ninka maanta heysta ee Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaasi oo 5 jaamacadood ka baxay, walow dadka iyo dhaqanku gadaal ka riixayo, tani oo ku qasbeysa in uu u hogaansamo habka hogaamiye kooxeednimada khaldan.
Hogaamiye Kooxeedka Galmudug
Axmed Ducaale Xaaf.
3-Hogaamiye Kooxeedka Galmudug, ma-mudne Axmed Ducaale Xaaf. Ninkani qof kasta taariikhdiisa waa uu hayaa, waa “Pregato Rosso” u adeegta qaabka burcaddaasi Talyaaniga aheyd. Waa nin dhib badan waxaana dhowaan markii ay is khilaafeen madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo laga shaki qabaa in Xaaf uu abuuray qal-qallo dhanka amniga ah oo aad u badan, kuwaasi oo Xamar laga fuliyey, balse Al-Shabaaab qoorta loo geliyay. Intaa wixii ka dambeeyay dowladdu aad ayey u cabsatay, si loo badbaadiyo dhiigga shacabka masaakiinta ah.
Xaaf waa nin musiibo ah laakiin dadku badankood iskuma mashquuliyaan, Galmudug waa maamul aan weli u dhisneyn qaabkii dastuurku u dhigay in ay gobolladu isku soo dhisaan, waxa ay waayeen meel ay dhul u raadiyaan xilli ay Puntland ku qabsatay Waqooyiga Gaalkacyo oo maamulkani Galmudug ka dhigi lahaa maamul buuxa. Galmudug waa weli ma laha idaacado lagula socdo waxa ka dhacaya. Waa maamul ay weli ku dambeeyaan hogaamiye kooxeedyo is xasdaya oo dhib badan kuwaasi oo aan isku tanaasul laheyn. Axmed Ducaale waxa uu metalaa in uu yahay ninka ugu roon ee lacag iyo ciidanba heysta, taasi oo uu ku maquuniyo hogaamiye kooxeedyada kale ee Suufiyada iyo qabaa’ilka kale ee gobolka ku abtirsada.
Hogaamiye Kooxeedka Hirshabeelle
4-Hogaamiye Kooxeedka Hirshabeelle: ma mudne Maxamed Cabdi Waare: Waa nin mansabka siyaasadeed ku soo koray xildhibaanno ugu hiiliyay in uu booska soo galo, waxaana uu helay hogaamiye kooxeednimada markii midkii ka horeeyay siyaasad looga tuuray booska. Waare waxa uu dhowaan ka dhawaajiyey in uu diyaar la yahay dhulka Soomaaliyeed in Itoobiya loo gacan geliyo, waa hogaamiye kooxeed isagoon siyaasi ruug cadaa xitaa aan aheyn markiiba ku dhiiraday in uu warbaahinta ku yiraahdo: “Dekadda Cadale ayaa annaaga naga diyaar ah.. haa waxaanu ka helaynaa lacag badan, waa fursad fiican iwm,” arrinkan ayaa uu ka dhawajiyey xilli itoobiya tiri 4 dekadood ayaan qaadaneynaa, ninkan ma ahan muwaadin ay ku dheer tahay in Soomaalidu iyadu wax qabsato oo isku tashato, oon iyo abaarba.
Akhristow, Nin waliba taariikh ayaa ka qormeysa, cid kasta oo taako dhulkeeda ka mid ah ka iibsato shisheeyana waa qof muwaadinnimada iyo Soomaalinimada meel uga dhacay.
Xilli aysan dowlad dalka wada difaaceyda aysan jirin ayaa, ninkan waxa uu doonayaa in uu maalqabeen ka noqdo hantida ma guurtada ah ee ummadda Soomaaliyeed.
Hogaamiye kooxeedka Koonfur Galbeed
5-Hogaamiye kooxeedka Koonfur Galbeed: ma mudne Shariif Xasan Sheekh Aadan “Shariif Sakiin” Shariifka waxaa tariikhdiisa kaaga filan sida uu u khiyaanay saaxiibkiisii Shariif Axmed oo ay muddo dheer bahwadaag ku ahaayeen siyaasadda Soomaaliya. Shariif Xasan waxa uu siyaasadda soo galay xilli dambe oo xeero iyo fandhaal kala dheceen waana 2004-tii, waxa uu ku bilaabay xildhibaan dabeecadiisu mar walba aheyd “Ku Qabso ku Qadi Meyside.” isagoo dadka isaga dhigi jirey in uu yahay qofka wadada saxda ah ku taagan.
Waxa ay Shariif Axmed isla joogeen Eritrea, isaga oo ku magacownaa mashruuc uu isagu Qaabeystay oo la oran jirey “Baarlamaanka Xorta ah” waxa uu Shariif Sakii Baydhabo uga horyimid M/weynihii ku meel gaarka ee C/laahi Yuusuf oo dhowr jeer si macno darro ah uu u fashiliyey.
Sakiin waxa uu ahaa ninka keliya ee fursadda madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed ay soo marto. Waxaan uu talada 3-da gobol ku qabsaday qaab fudud, waxaana uu taladan go’aansaday in uu qabsado markii uu ku soo hungoobay meelihii kale oo dhan.
Waxa uu ogaaday in qof kale oo awoodiisa oo kale heysta ama darajadiisa siyaasadeed oo kale heysta in uusan ka jirin gobolka Bay, isaga oo darajooyin waaweyn ka soo degay ayaa uuna ku dul habsaday dadkii reer Baydhabo, waxa uu si uu isku diyaariyo dib ugu noqday qurbihii uu ka yimid isaga oo bankiyo deyn ka soo qaatay isla markaasina qurb-joogta dibadaha qaaraan ka soo aruursaday. Waxaa uu xoog ku galay Koonfur Galbeed isaga oo garab ka helayay Xasan Sheekh, waxaana uu kaxeystay ciidamo Itoobiyaan ah si uu dadkiisa xoog ugu qabsado.
Hogaamiye Kooxeedka Jubaland
Axmed Islaan Madoobe
6-Hogaamiye Kooxeedka Jubaland State: ma-mudne Axmed Islaan Madoobe: Marka dhab loo fiiriyo Axmed Islaan Madoobe taariikhdiisa shaqsiyadeed waa is-burineysaa, waa qaabka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kale, wa wadaad aaminsan in haddii sidii la rabey ay gaari wayday, la isku maamulo sidii ay ka fursan weydo oo dadku ku badbaadi karaan, fekerkaas isaga ah oo dad badani ay diidan yihiin, waxaa uu runtii Axmed ka mid ahaa dadkii diinta Islaamka in wax lagu qabsado aaminsanaa xilligii la suuliyey hogaamiye kooxeedyadii hore.
Axmed Madoobe markii uu arkay in xaalkii uu xumaaday oo dadkii u bateen dhanka “Diin laawe-nimada -Secularism” waxaa uu Axmed si uu naftiisa iyo tan kooxdii Mucaskarka Raaskambooni u badbaadiyo uu tartiib tartiib u qabsaday magaalada Kismaayo, tani oo loogu codeeyay in uu isagu meesha ugu tun weyn yahay kadib markii ay xoogagiisii oo careysan dhirbaaxo ku dhifteen hogaamiye kooxeedkii Barre Hiiraale. Axmed Madoobe waa nin wax badan dejiyay waxaana lagu xasuustaa heshiisyadii Addis Ababa ee dejinta xiisadda Jubaland.
Walow ay sidaa tahay waxa uu isagu haatan u muuqdaa nin daneyste ah weli isaga oo ah nin dantiisa ka dhex fiirsada kooxda Farmaajo ee hogaamiye kooxeedyada federaalka ah. Axmed Islaan waa caqliloow sida loo noolaado aad u yaqaan, isla markaasina aan halgan badan soo maray, waa nin uu wado waqtigu oo iska raaca dowladda dhexe isla markaasina dhinac isaga soda isaga oo ogsoon in xaaladdu Islaanimana ka tagtay, Gaalnimana aaney gaarin oo la sabeynayo meel dhexe oo jaha-wareer ah.
Axmed Islaan Madoobe waa hogaamiyaha keliya ee Sheekh ah isla markaana ku jiri jirey xeyn-daabkii maxaakiimta Islaamiga ee Soomaalidu mar dooneysay in ay is-xukun ku gaaraan, balse si hoose loo fashiliyey. Haatan waxa uu GACAN BIR ah ku maamulaa Jubaland Isaga oo sheekooyinka hoose ay sheegayaan in uu xitaa dhirbaaxo indhaha kaga dhiftay wadanka Kenya oo dano badan ka lahaa in ay dhulka Jubaland goostaan oo ay gumeystaan.